Banyere Anyị - Yiwan Apparel Co., Ltd.
Ọpụrụiche na uwe ihe kpatara ụmụ nwoke, t-shirts, hoodie & sweatshirts, mkpirisi na uwe ogologo ọkpa, wdg. Ma nabata atụmatụ omenala nwere obere MOQ 100pcs kwa ụdị kwa agba.
Na 30,00 square mita. Ihe karịrị 100 mmadụ. Dị na Dongguan, China, nke bụ mpaghara ụlọ ọrụ uwe mechiri nnukwu akwa na ahịa ngwa ahịa, nke na-agbanwe maka ihe ejiji kachasị ọhụrụ na ngwa ngwa ngwa ngwa. mechiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen na Guangzhou nke dị mfe na ngwa ngwa maka mbupu.
Nka anyị na ihe okike mara mma
Dabere na amụma "Ịdị mma mbụ, ka ọ dị mma ma dị ike, mmepe na-adịgide adịgide". Anyị na-atụ anya na-enyere gị aka na-eke ngwaahịa na ndị mmadụ n'ezie na-enwe mmasị yi na-ekere òkè, N'ihi na gị oké echiche kwesịrị pụta na ọha.
Na igwe na-enyocha ákwà na igwe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka akwa akwa dị mma maka ime ka ịzere ntụpọ ákwà.
Ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-arụsi ọrụ ike maka nlele nke ọma.
Igwe dị elu na ngalaba ọkachamara ọkachamara QC maka njikwa njikwa na ngwaahịa zuru oke.
Ndị na-eto eto nwere mmasị na ndị na-ere ahịa ọkachamara maka ịzaghachi n'oge maka nkwurịta okwu na-arụ ọrụ nke ọma na tupu ire ere, ahịa na mgbe-ahịa.
Anyị kwenyesiri ike na naanị ịdabere na ọrụ, arụmọrụ, nnọgidesi ike na iguzosi ike n'ihe nwere ike iduga anyị n'ọdịnihu ka mma. Ọ ga-abụ njem na-atọ ụtọ iji soro gị niile na-eto eto.
Anyị mere uwe gị. Ọrụ ụgbọ oloko anyị ga-enyere aka n'ihe gị mfe.
Akwụsịla, Biko nweere onwe gị ịkọrọ m ajụjụ ọ bụla, nzaghachi, ma ọ bụ ndụmọdụ na;